ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း၏ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လက်တွေ့ ကျင့်စဉ် (၁၁)
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း၏ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လက်တွေ့ ကျင့်စဉ် (၁၁)
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ဟူသော ဗုဒ္ဓသြဝါဒအရ အလေ့အကျင့် ပြုလုပ်လာခဲ့သော ကျွန်ုပ်အမြင်၌ လောကသည် နှစ်မျိုးရှိ၏။ ပထမတစ်မျိုးမှာ “ပညတ်လောက” သို့ မဟုတ် အိပ်မက်လောက (dream world) ဖြစ်၍ ဒုတိယတစ်မျိုးမှာ “ပရမတ်လောက” သို့ မဟုတ် ဒိဋ္ဌလောက (actual world) ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သတ္တဝါဟူသမျှသည် သံသရာလဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှစ၍ “အိပ်မက်လောက” ထဲ၌သာလျှင် တစ်လျှောက်လုံး မွေ့ လျော်ပျော်ပိုက်လာခဲ့ကြ၏။ အဘယ်ကြောင့် “အိပ်မက်လောက” ဆိုနိုင်ပါသနည်း။ (ကျွန်ုပ်မှာ စာတတ်ပေတတ်မဟုတ်သောကြောင့် စာတတ်သူများ၏ အမြင်၌ အသုံးအနှုန်း၊ အခေါ်အဝေါ်များမှာ မှန်ကောင်းမှ မှန်ပေ၏။ သို့ ရာတွင် စာမတတ်သော အရပ်သားများ နားလည်အောင် “စိတ်ဝင်စားအောင်” ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်၍ ၄င်းတို့ နားလည်ကြလျင် ပြီးရောဟု သဘောပိုက်မိပါတော့သည်။)
နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်သည် (၄င်းတို့ လူစု မျှော်မှန်းသော ပန်းတုံးတိုင်သို့ ရောက်၍) ၀န်ကြီးဖြစ်လာသည် ဆိုအံ့။ မျှော်မှန်းသော အရာကို ရခါစ လူများ၏ထုံးစံအတိုင်း “ငါတမူကား ၀န်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာပေပြီ” ဟူသော သတိရမှုသည် မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။ အိပ်ရာမှနိုး၍ မျက်နှာသစ်သော အချိန်မှသည် မျက်စိနှစ်လုံး မှိတ်သော အချိန်တိုင်အောင် (လက်ထပ်ပြီးခါစ သတို့ သားနှင့် သတို့ သမီးသဖွယ်) အခြားသော အလုပ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခိုက် အချိန်များမှတပါး၊ အားလပ်သော နာရီပိုင်း၊ မိနစ်ပိုင်းဟူသမျှတွင် မိမိအဖြစ်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အနုလုံ-ပဋိလုံ ပြန်လှန်သတိရ ဆင်ခြင်မိပေလိမ့်မည်။ အိမ်ရှေ့ တွင် ဆိုဖာကြီးပေါ်၌ ပက်လက်လှန်၍ ဆေးလိပ်သောက်ရင်းလည်း “ငါဝန်ကြီးဖြစ်လာပေပြီ။ ငါ့ကို ကူညီသော မည်သူအား မည်သည့်ရာထူးပေး၍ ငါ့ကိုထောက်ခံသော မည်ဝါအား မည်ကဲ့သို့အကျိူးခံစားခွင့်ရှိအောင် လုပ်ပေးအုံးမှ တော်မည်။ ငါ့ကို ပမာမခန့် ရေးသားသော မည်သည့်အယ်ဒီတာကို တရားစွဲပြီး ထောင်ချမည်ဆိုလျင် ချနိုင်သော အာဏာ ငါ့လက်ထဲသို့ရောက်လာပေပြီ။ ငါတို့ အဖွဲ့ ပြုတ်အောင် ကြံကြသော မည်သူမည်ဝါတို့ အားလည်း ပုဒ်မ ၅ နှင့် ဖမ်းချုပ်မည်ဆိုက ချုပ်နိုင်ပေပြီ” စသည်ဖြင့် စိတ်ကူးလျက်ရှိစဉ် သတင်းစာရောက်လာ၍ ကောက်ကြည့်လိုက်ရာ မြို့ တစ်မြို့ သို့မိမိရောက်ခဲ့စဉ်က အရာရှိများနှင့် မြို့ မိမြို့ ဖဆိုသူများက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြပြီး အမျိုးသမီးကလေးများက မိမိအား ပန်းစည်းဆက်နေကြသော ဓာတ်ပုံကိုမြင်လိုက်ရ၍ ၀န်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းအတွက် တိုး၍ကြည်နူးပြန်သည်။ တဖန်သတင်းစာထဲ၌ မိမိပြောခဲ့သော မိန့် ခွန်းကို တွေ့ ရ၍ ဖတ်ကြည့်ရာ သြဘာလက်ခုပ်တီးကြသော အသံများပင် နားထဲသို့ ဝင်လာ၍ “တယ်တော်တဲ့ ငါပေတကား” ဟု ဆထက်ထမ်းပိုး စိတ်ကြည်နူးခြင်း ဖြစ်မိပြန်သည်။ ထိုအခိုက်တွင် ၀န်ကြီးကတော် ပြေးဝင်လာ၍ “ကောင်းနိုင်ကြသေးရဲ့ လားရှင်၊ တင်တင်မြင့်ကျောင်းအသွားမှာ ကားမှောက်ပြီး ဆေးရုံရောက်နေပြီတဲ့။ တယ်လီဖုန်းလာနေတယ်။” ဟုပြောလိုက်ရာတွင် ပန်းစည်းဆက်သဖြင်းများ ခံယူနေသည့်အသွင်အပြင်နှင့် မိန့် ခွန်းကို ချီးကျူးကြသည့် သြဘာလက်ခုပ်သံများသည် (အိပ်ယာမှ လန့် နိုးသူ၏ အိပ်မက်ကဲ့သို့ ) ၀န်ကြီး၏ မျက်စိထဲ၊ နားထဲမှာ ရုတ်တရတ်ချက်ချင်း ကွယ်ပျောက် သွားကြလေတော့သည်။
ဤနေရာ၌ ဆိုဖာပေါ်တွင် ၀န်ကြီး၏စိတ်ကူးနှင့် လူတစ်ယောက်၏ အိပ်မက်မက်ခြင်းတို့ သည် မည်ကဲ့သို့ ခြားနားခြင်း ရှိပါသနည်း။
၀န်ကြီး၏ စိတ်ကူးမှာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်၍ အိပ်မက်မှာ တကယ်မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့လျင် အိပ်မက်ထဲက အဖြစ်အပျက်မှာလည်း မနိုးသေးမီ အခိုက်အတန့် တွင် အဟုတ်တကယ်ပင် ထင်ရသည် မဟုတ်ပါလော။ အိပ်မက်ထဲတွင်လည်း ၀မ်းသာစရာရှိလျင် ၀မ်းသာရသည်။ ၀မ်းနည်းစရာရှိလျင် ၀မ်းနည်းရသည်။ ကြောက်စရာရှိလျင် တကယ်ကြောက်ရသည်ပင် မဟုတ်ပါလော။ နိုးလာသောအခါ၌ ထိုအခြင်းအရာများ ပျောက်ကွယ်ရသည့်နည်းတူ ၀န်ကြီးမှာလည်း သမီးကားမှောက်သည်ဆိုသော သတင်းကိုကြားရသောအခါတွင် ပန်းစည်းဆက်သော အမျိုးသမီးကလေးများနှင့် သြဘာလက်ခုပ်သံများသည် ချက်ချင်း ကွယ်ပျောက် သွားတော့သည် မဟုတ်ပါလော။ ဤမျှသာမကသေး၊ ပန်းစည်းဆက်သော ရူပါရုံနှင့် သြဘာလက်ခုပ်တီးသော သဒ္ဒါရုံတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကြည်နူးမှုလည်း ကွယ်ပျောက်သွား၍ သမီးအတွက် ရတက်ပွေရသည့် သောကစိတ် ၀င်ရောက်လာတော့သည် မဟုတ်ပါလော။ တခဏချင်း ကွယ်ပျောက်နိုင်၍ တခဏချင်း ပြောင်းလဲနိုင်သော အခြင်းအရာကို အဟုတ်တကယ်ဟူ၍ မှတ်ယူထိုက်ပါသလော။ အိပ်မက်ထက် ဘယ်လောက်များ ပိုပြီးခိုင်မြဲမှု ရှိပါသေးသနည်း။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:00 AM
What is Buddhism? (အပိုင်း ၅)
သူငယ်တော်တောရ ဆရာတော်၏ နေ့ စဉ်ဟောပြ သြ၀ါဒ (၁၁)
What is Buddhism? (အပိုင်း ၄)
နိဗ္ဗာန်အယူအဆကို ထေရ၀ါဒ ရှုထောင့်မှလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း...
What is Buddhism? (အပိုင်း ၃)
What is Buddhism? (အပိုင်း ၂)
သူငယ်တော်တောရ ဆရာတော်၏ နေ့ စဉ်ဟောပြ သြ၀ါဒ (၁၀)
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း၏ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လက်တွေ့ ကျင့်စဉ် (၁၀)
What is Buddhism? (အပိုင်း ၁)